Home Wararka Dowladda Burundi oo ku gacan seyrtay in ciidankeeda lagu bedelo ciidamada Eriteriya
Dowladda Burundi oo ku gacan seyrtay in ciidankeeda lagu bedelo ciidamada Eriteriya
Dadaal badan oo ay wadaan MW. Farmaajo iyo RW Itoobiya Abiye Axmed aya la qorsheynayaa in dufcadii ugu horreysay oo ka socda ciidamada Eriteriya in ay yimaadaan magaalada Muqdisho aya waxaa qorshahan ka biyo diiday dowladda Burundi kaddib markii ay diideen in ay ciidankooda kala baxaan Soomaaliya si loogu bedelo ciidamada Eriteriya ee dhawaantan laga soo qaaday xuduudda Itoobiya iyo Eriteriya.
Sida ay diblomaasiyeen shisheeya ah u sheegeen MOL, dowladda Burundi aya ku doodeysa in ka badan 200 oo ka mid ciidankeeda lagu dilay Soomaaliya, waana ficil aan laga fileyn MW. Farmaajo in uu sida ugu abaal dhaco dowladda Burundi” Ayuu yiri.
Dowladaha Uganda & Jabuuti aya sido kale diidan in ciidanka Eriteriya la keeno Soomaaliya. Waxaa jira tuhun badan oo ay qabaan Soomaalida in uu rabo MW. Farmaajo in uu u isticmaalo ciidamada Eriteriya in uu ku maquuniyo shacabka si uu xukunka xoog ugu heysto. Waxaa tuhunka uu sii batay kaddib markii ciidamo ay sheegeen Ururka Midowga Afrika in aanay ka tirsaneyn taliska AMISOM loo isticmaalay shacabka Baydhabo kaddib mudaaharaadyo ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo oo ay ku diidanaayeen farargelinta dowladda Farmaajo iyo xariga Mukhtar Robow.
Madaxweynaha Eriteriya oo dhawaan booqasho ku tegay dalka Imaaraadka Carabta, ayaa loo balan qaaday in ciidankiisa AMISOM ay mushaarkooda iyo agabkoodaba ay bixinayaan dowladda Imaaradka.
Qaar ka mid ah wasiirada Burundi ay baraha bulshada farriimo u soo dhigay dowladda Soomaaliya waxayna sheegeen “In aanay marnaba ogolaaneyn in ciidankooda lagu bedelo ciidamada laga soo wado Eriteriya” Waxaa qaar kale ay sheegeen “In Soomaaliya ay ku abaal dhacday Burundi oo ciidan badan u huray naftooda in ay ka difaacaan Shabaab”
Waxaa maalmo ka hor ka soo baxay magaalada Asmara markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Eriteriya, kaasoo sida agab ciidan oo kala duwan, iyadoo la qorsheeyay in ciidamada Eriteriya ay Soomaaliya si buuxda u soo galaan horraanta sanadka foodda nagu soo haya ee 2019.
Previous articleCiidamada Itoobiya oo caawa lagu weeraray degaanka Bardaale
Next articleMarkii labaad oo G/X Gobolka Banaadir uu si sharci darro ah shaqo ka joojin ku sameyo
Maxeey tahay sababta Maalin walbo loo xiraayo wadooyinka Muqdisho!!
Xildhibaanada K/Galbeed”waxaan qireeynaa in aysan doorasho ka dhicin baydhabo Warka Q.M...